नेपालमा कोरोना सं’क्रमित युवकको आ’त्मविश्वास: भन्छन् ‘मलाइ केहि पनि भएको छैन, केही दिनमै ठिक हुन्छु’ – Butwal Sandesh
नेपालमा कोरोना सं’क्रमित युवकको आ’त्मविश्वास: भन्छन् ‘मलाइ केहि पनि भएको छैन, केही दिनमै ठिक हुन्छु’
काठमाडौं । ‘कोरोना भा´इरसको लक्षण छैन । मेरो फेरि एक पटक परीक्षण गरियोस्’ कोभिड–१९ को परीक्षणमा पोजेटिभ आउँदा पनि उनी भन्दै थिए । उनी अर्थात् कोरोनाबाट सं’क्रमित भएका चौथो नेपाली नागरिक ।
दुबईबाट भारत हुँदै नेपाल आएका धनगढीका ३४ वर्षका उनको आ’त्मविश्वासमा सुरुदेखि नै कमी थिएन । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका उनको गएको शुक्रबार रिपोर्ट पो´जेटिभ आयो । त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि नजिक पर्न ड´राए ।
तर, उनले हिम्मत हारेनन् । आफूलाई बेवास्ता गरिएको र तातोपानीसम्म नदिएको खबर सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिए । त्यसपछि चिकित्सक पनि केही ग’म्भीर देखिए ।
‘मैले सुरु देखिनै हिम्मत हारिन’ उनले भने, ‘अहिले पनि मलाई केही भएको छैन जस्तो लाग्छ ।’
उनले टेलिफोनमा भने, ‘यो सामान्य रो´ग हो । यसले कमजोर व्यक्तिमा आ’क्रमण गर्छ । यो रो´ग लागेपछि खुशी हुनुपर्छ, हाँसिरहनुपर्छ । म त्यस्तै गर्छु ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ । ‘हिजो अस्ति सामान्य पखाला लागेको थियो । डाक्टरले भनेका छन् यो निको हुने लक्षण हो रे’ उनले भने, ‘डाक्टरले भने अनुसार औषधि खाइरहेको छु । केही दिनमै ठिक हुन्छु भन्ने लागेको छ ।’
उनको दोस्रो चरणको नमुना संकलन गर्न बाँकी नै छ । ‘नियमित परीक्षण भइरहेको छ । केही सुधार आएको पाइएको छ’ सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा. जगदीश जोशीले भने, अनलाइन खबरले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
कोरोना सं’क्रमित भन्ने बित्तिकै स्वास्थ्यकर्मी बि´रामीको नजिक जान हिच्किचाएपछि कसले उनीहरुको उपचार गर्छ र उनीहरु निको हुन्छन् ? बुटवलमा कोरोना बिशेष असपतालमा ज्या’न गु’माएका युवकको परिवारले पनि चिकित्सकको ला´पर्वाहीले कोरोनाबाट नभई निमोनियाबाट आफ्नो मान्छेले ज्या’न गु’माएको आरोप लगाएका छन् । किनकि उनलाई पनि तातो पानी समेत खान दिइएको थिएन र ज्वरो स्वयं बि´रामीलाई नै नाप्न लगाइएको खबर यस अघि नै सन्चारमाध्ययममा प्रकाशित भैसकेको छ ।
बि´रामीसंग यस्तो ब्यबहार गर्ने चिकित्सकलाई के कसरी का´रवाही अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने बारेमा बेलैमा सरकारले होस् नपुर्याए परिस्थिति बिक´राल बन्दै जाने निश्चित छ ।